Qarax Gilgilay Gaarisa - Faahfaahin | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax Gilgilay Gaarisa - Faahfaahin
Nairobi (Keydmedia) - Qarax xoogan oo khasaaro geystay ayaa wuxuu goor dhaw uu ka dhacay magaaladda Garissa ee dalka Kenya, iyadoo qaraxa si weyn looga maqlay qeybaha kala duwan ee magaaladda guud ahaan.
Qaraxaan oo aad u xooganaa ayaa waxaa lala beegsaday seddex gawaari oo ka yimid dhinaca degmada Libooye Kenya, waxayna ku soo fool lahaayeen magaaladda Garissa, isla-markaana qaraxa ayaa wuxuu la kacay mid ka mid ah gawaaridaasi.
Qaraxa oo sawaxan xoog leh sameeyay, ayaa waxaa loo badinayaa inuu yahay miinada dhulka lagu aaso, lagana haggo gacanta, isla markaana waxaa isa soo tareysa khasaaraha dhabta ah ee uu geystay qaraxaasi.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in qaraxaan ay ku dhaawacmeyn afar ka mid ah Ciidamadda Dowladda Kenya, oo iyagu saarnaa gaarigii uu qaraxu la kacay, kaasoo la sheegay in uu soo gaaray burbur aad u xoogan.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in goobta uu qaraxu ka dhacay ay soo gaareyn ciidamo fara-badan oo kuwo ammaanka ah, isla-markaana waxay u kuur-galleen qaabka uu qaraxu u dhacay iyo wax-yaabaha sababay.
Iskusoo wada-duuboo majirto wax war ah oo ka soo kala baxay Dowladda Kenya, iyadoodhinaca kalana aysan jirin cid sheegatay qaraxaasi, laakiin waxaa loo-maleynayaa Xarakada Al Shabaab.